Orinasa fanaovana fitafiana ara-pahasalamana - Mpanamboatra fitafiana fitsaboana any Shina, mpamatsy
Sarontava fandidiana azo alefa (...
Isolatio medikaly fanary ...
Azo ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana, laboratoara, atrikasa, toerana fanamboarana, hosodoko, fizahana ara-barotra sy an-trano, insulated isolation, sns. Ho an'ny fitokana-monina sy fiarovana amin'ny ankapobeny. . Ny sezà matevina, ny saron-doha mifatotra ary ny fitaratra dia manampy amin'ny fiarovana avo lenta kokoa.
Famolavolana azo tsofina: ny akanjo miaro ny CE 2 kilasy PP sy PE 40g voamarina dia ampy handraisana andraikitra henjana nefa mbola manome aina sy malefaka tsara.
Volavola azo ampiharina: Ny akanjo dia mampiseho endrika amboara vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy ary mamela ny fonon-tanana hatao mora fiarovana.
Volavola be pitsiny: vita amin'ny maivana sy tsy tenona ny akanjo, izay miantoka ny fanoherana ny tsiranoka.
Famolavolana habe: Ity akanjo ity dia natao hifanaraka amin'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny habe rehetra, sady manome fampiononana sy fahalemena.
Drafitra fatorana roa: ny akanjo dia misy famolavolana fehin-kibo roa eo amin'ny andilana sy ao an-damosin'ny vozona mba hamoronana akanjo milamina sy azo antoka.
Namboarina tamin'ny fanjairana sy ny famatorana ilay lamba tsy misy tenona （SMS sy lamba tsy tenona: voaforona vatan'ny vozon'akanjo, tanany: fehikibo sy kofehy mifatotra. Kofehy mifono vy ro elasttouiff ary: fehin-kibo amin'ny valahana: kendrena: ho an'ny fampiasana tokana Tsy steril .
Akanjo fanokana-monina Bata Quirurgica fanary azo ampiasaina
Fandaharana azo ampiharina: Drafitra fametahana roa sosona vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy.
Fitaovana avo lenta: vita amin'ny fitaovana maivana tsy tenona mba hiantohana ny fanoherana ny tsiranoka.
Mety: habe isan-karazany mifanaraka amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny endriny sy habe rehetra, sady manome fampiononana sy malefaka.
Famolavolana kofehy: Ny fikolokoloana kofehy dia voafantina amin'ny andilana sy ao aorian'ny vozona mba hamoronana endrika milamina sy azo antoka.